Author: Vudora Faer
Boorana keessatti — Raaba dorii jedhamu. Namuu qabeenya mataa isaa qabaatee kitaabaa mirga guutuu qaba. Kanaaf lafa fagoo deemee lola gochuu jalqabe. Raabni isaa yeroosii Yaayyaa Gulleelee jedhama ture. Akka jedhamuttiis bara Gadaa Michillee kana Oromoon fardaan loluu jalqabe.
Akkaata godaansa Oromoo kan ofumaan deemaa ture kana, isa jaarraa 16ffaatti akeekuun hin tahu. Help Center Find new research papers in: Lachuu saanii bara tti Gadaarra turan. Abdaarrii-ayyaana dachii midhaan baasisuuti Qaallonniis sirna ayyaana amantii kanarratti ummata gorsu, jajjebeessu. Ijoolleen waggaa Gadaa jidduufi gaheeyyiin waggaa Gadaa jidduu yoo Goggeessi Gadaa isaanii tokko tahe hiriyyaa tokko jedhamu. Baalli kan Melba weeraruu jalqabe Muudannii dhufatee hamma qarqara laga Awaashitti irra qubatan.
Gujii keessatti — waggaa Gadaa tti e.
Maqootiin kun hundi hiikkaa mataa isaanii qabu. Walumaagalatti aadaan calaqqisan akkaataa dinagdeefi polotikaa sirna tokkoo, akkaataa dhalli namaa ittiin naannoo isaa hubatee jijjiiru tahuu olitti ilaalleera. Kanarratti bakka guddaa qaba. Humna guddaan itti haa kitaab malee, Galaawudoos Oromoo mohuu dadhabee, dahannoo jabaa qotatee Dawaaroo keessa qubate.
Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe.
Yeroo hiikamuus ayyaana guyyootii sana ibsu. Bara Muudana kana seera jajjabaa lama tumatan. Karaa polotikaatiin garuu, garaagarummaa guddaatu jira. Heeraafii seerri biyyaa akka aadaatti fudhatamee jabaata, kabajamaas, waan litaaba jireenya ofii ittiin geggeeffatan taheef seeraafi heerri ni kabajamu jechuudha. Bakka warrii Gadaa itti murtii seeraa kennan, dubbii gosaa ilaalanfi marii godhanitti argamanii irraa baratu.
Filmaata qondaaloota Gaddfi marii biyyaarratti argamuudhaan gargaaru. Mootummooleen habashaa darban Oromoo cabsuuf jecha meeshaalee waraanaa, ogeessotaafi loltoota waliin biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa kadhachuun Oromoo irratti duulaa akka turan seenaan hinhaalle.
Namchi mataan amantii Qaalluu hoggaa jedhamu, haati mana isaa ammoo, qaallitti jedhamti. Seenaan godaansa Oromoo kan jaarraa 16ffaan duraa haala kana keessaa tokkorratti hundeeyfamuun nimala. Aadaa jiran keessaahiis amantiin hordafamaa ture, sirnicha utubee kan jabeesse dha.
Kanaaf Oromoon jaarraa 16ffaa keessa godaanuu jalqabee utuu hintaane, jaarraa hedduun dura suuta suutaan, ilmi quxxisuun dabree qubachaa, lafa margaafi bishaan qabu barbaadaa seenaa.
Inni hiikaa hangafaa waan qabuuf, dureettiin jaalatama waan ibsuufi gaafa wanti hojjetan hundi, ormooo namatti tolaniifi ayyaana carraa gaariidha. Isaanutuus yeroo ayyaanaa muudatti muudamaas. Ijoolleen dhiiraa Gadooma abbaa isaanii keessatti dhalatan Dabballee jedhamanii yaamaman. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa a. Kanatti dabalee waan dhimma biyyaa ilaalan yeroo kanaa kaasee qorachuu dandaya. Kanarraa Marsaan Gadaa Arsii keessatti waggaa 80 taha jechuudha.
Kanneen utuu kana godhanii, yeroo yerotti dhaqanii Qaalluu muudu. Gadaa kanatti Abbaan Gadaa Gadayyoo Galgaloo ture. Michilleen Faxagar irra dhaabbatee Cafaat, Bazimoofi Daamoot salphatti rukutuu jalqabe.
Waliigalteen jaalalaan, tokkummaan waliinjiraachuuniis aadaa jiraachaa swenaa.
Amaarri gara hallayyaafi holqatti galtee dhokatte. Sirna kana keessatti manguddoonni qooda lammii guddaa qabu. Hamma Gadaan dhufee bakka qabtetti, manguddootaan buluun kun sadarkaa sadarkaan guddataa dhufuun hinhafne.
Tooftaan Minilik itti fayyadame, seenaaa alaa argate qofa osoo hintaanee Oromoota gantuufi sobduu taate qabachuudhaan, Oromoodhumaan Oromoo akka cabse qorattoonni seenaa addeessaniiru. Gadaa isaa faarsa, kabaja. Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin loon qalamanii, nyaachisni guddaan godhama.
Tuulama keessatti — Dabballee jedhamu. Murtii polotikaarratti fuulaan yoo qooda hin fudhannellee, waan yaada ummataa of harkaa qabaniif qajeelchuufi karooraratti qooda guddaa kennu. Ilmaan kormaa sadarkaa kana: Duraani Oromoonni lammi tokko tahee osoo jiraatanii gosa Booranafi Bareentummati adda bahan. Fakkeenyaaf, Gidaadaafi Gabra naannaa kan jedhaman ayyaana carraa gadheeti.
Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. Isaaniis warraa akka a.